TANAMBAO VERRERIE : Mpanendaka lavon’ny balan’ny polisim-pirenena ao Toamasina
Nitazona ny fanamby napetrany ny polisim-pirenena ao Toamasina, dia ny fanaovan’ny vahoaka fety am-pilaminana. Hentitra ny fanaraha-maso ny filaminam-bahoaka nandritra ny fety. 2 janvier 2018
Nampitomboina ny isan’ireo polisy nanao fisafoana any anaty lalam-pasika. Ny alahady 31 desambra tokony ho tamin’ny 4 ora maraina, rangahy iray nirava niasa no nisy nanendaka tao Ambolomadinika. Lasa ny sakaosy teny aminy. Nifanandrify tamin’ny fotoana nanaovan’ny polisy fisafoana teny amin’ny faritra Ambolomadinika io fanendahana io. Vokany, niroso tamin’ny fanenjehana an’ilay olon-dratsy ny polisy avy eo anivon’ny Kaomisaria Bazary Kely.
Nitsoaka nandositra tao Mangarivotra ilay mpanendaka. Na dia efa nanambana tamin’ny alalan’ny tifi-danitra aza ny polisy dia nanohy ny fitsoahany hatrany ilay olon-dratsy. Voatery nampiasa hery ny mpitandro filaminana. Tao Tanambao Verrerie no lavon’ny balan’ny polisy ilay jiolahy. Tafaverina amin’ny tompony ilay sakaosy nendahiny.
Mbola sarona teny aminy ny sabatra lava lela fampiasa amin’ny asa ratsy. Tovolahy vao erotrerony tokoa ity jiolahy maty voatifitra ity satria sahabo ho 22 taona eo ho eo. Tsy nahitana taratasy mombamomba azy kosa teny aminy. Eny amin’ny tranom-paty Hopitaly Be ny razana miandry izay mety ho havany.
Nandritra ny fampahafantarana izao vokatra azon’ny polisy izao no nanaovan’ny Kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys avy ao amin’ny Kaomisaria Bazary Kely antso avo ho an’ny vahoakan’i Toamasina iray manontolo mba tsy hisaraka karapanondrom-pirenena. Tsy hoe vita ny fety dia hijanona ny fisafoana fa hitohy hatrany izany, hoy ny Kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys.